Puntland:- G.Baarlamaanka oo duray xukuumada xili Fadhigii Baarlamaanku xidhmay [Muuqaal]
Wednesday August 29, 2018 - 09:36:51 in Wararka by Super Admin
Afhayeenka Baarlamaanka PL Axmed Cali Xaashi ayaa maanta soo xidhay kal-fadhigii 41- ee Baarlamaanka PL kaasi oo arrimo badan looga dooday. Wuxuu sheegay in fadhigan kiisa kale ay qabandoonaa Bisha October 25 kaasi oo ah kii ugu danbeeyay ee Baarl
Afhayeenka Baarlamaanka PL Axmed Cali Xaashi ayaa maanta soo xidhay kal-fadhigii 41- ee Baarlamaanka PL kaasi oo arrimo badan looga dooday. Wuxuu sheegay in fadhigan kiisa kale ay qabandoonaa Bisha October 25 kaasi oo ah kii ugu danbeeyay ee Baarlamaanka PL.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in Baarlamaanku wakhti adag ku soo shaqeeyeen isaga oo aan cara-baabin waxa uu ugala jeeday balse loo fasirtay inuu uga jeeday in Baaralaamnka PL aanu helin Mushaharooyinkii & Gunooyinkii ay xukuumada ku lahaayeen.
Gudoomiyaha Baarlamaanka PL ayaa lagu dhaliilaa inta badan nin jilcsan oo ku dhex-milmay xukuumada Dr Abdweli Cali Gaas, waxana uu ku fashilmay inuu la xisaabtamo Golaha xukuumada PL xili Puntland ay wajahayso xaalada adag, dhaqaale & Amaanba.